စိတ်ကို Chatsky "အရူး" Famusov, Skalozub ကနေကွာခြားချက်ကဘာလဲ? | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
စိတ်ကို Chatsky "အရူး" Famusov, Skalozub ကနေကွာခြားချက်ကဘာလဲ?
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ Griboyedov, သူ့သူရဲကောင်း, Chatsky, စာရေးဆရာရဲ့ကမ္ဘာ့အမြင်အခင်းအကျင်း Quote များအတွက်ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ကိုသိသောလူများ၏စာမျက်နှာ၏အဆိုအရ; မင်္ဂလာရှိ၏ umaquot; ။
ဆောင်းပါး Quote ခုနှစ်တွင်; zillion terzaniyquot; Goncharov ရေးသားခဲ့သည်: Quote;
(ဥပမာသနည်း;; Quote တရားသူကြီးများမှာအဘယ်သူသည် Quote) သို့မဟုတ်ယင်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများလူ့အဖွဲ့အစည်းကိုယ်စားလှယ်များ famusovskogo ကြောင့် Chatsky ကသူ၏ထင်မြင်ချက်များကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့်မတူညီကြပါ, တစ်ဦးစွယ်စုံကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကြောင်းကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်ဒါဟာ monologues Chatsky ကိုဖတ်သင့်ပါတယ်။
Chatsky FAMUSOV မတူဘဲကိုမဆိုအခမဲ့-စဉ်းစားတွေးခေါ်နဲ့သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ထင်မြင်ယူဆချက်ကိုလက်ခံမပေး:
ပညာရေး, ကသူတို့အနေနဲ့ရွားလှအကြောင်းမရှိအမျိုးမျိုးသောဘေးအန္တရာယ်ကိုတွေ့မြင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူ့အဖွဲ့အစည်းများကနှင့် Famusov အားဖြင့်ပယ်ချပညာရေး famusovskogo ။
ကိုစကားလုံး Quote ကြောင်းကို၎င်းအောက်မေ့ကြကုန်အံ့, umnikquot; , Quote;; farmazonquot; ဟာသနှုတ်ကပတ်တော်ကို Quote နှင့်အတူဖော်ထုတ်ဖြစ်ပါတယ် karbonariyquot; နှင့် quote; yakobinetsquot ;, t ကို။ Quote ;. umnikquot ဖြစ်၏ ဒါဟာစကားလုံး Quote ညီမျှ၏, ရန်သူအာဏာ revolyutsionerquot; ။
ဒါဟာစိတ်ကို Chatsky Famusov အလားအလာကနေကွာခြားချက်ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါသနေိုငျအလုပျ Griboyedov quote; မင်္ဂလာရှိ၏ umaquot;, ပုံစံ Chatsky နှင့် Famusov အချင်းချင်းလုံးဝဆန့်ကျင်ဘက်နှစ်ဦးက၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အလားအလာရှိပါတယ်တစ်ခုချင်းစီ၏လူများ၏ပုံရိပ်ကို, ဘဝအားမိမိသဘောထားကိုသည်, မိမိကငျြ့တရားနှင့်အမှန်တရားထုတ်ဖော်။ Toby ကြွယ်ဝသော, ဒါပေမယ့် Quote သော်လည်းတူညီသောသူဖြစ်၏; မကြာသေးမီက umaquot; , Careerist နှင့်မသိဘဲ။
အခြေခံအားဖြင့်သူတို့ရဲ့ပဋိပက္ခရုံကိုသူတို့လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောထင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအပေါ်အခြေခံသည်။ သူတို့ကအသက်, အကောင်းဆုံးကတော့, ဂုဏ်အသရေ၏အယူအဆအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောဦးစားပေးအစီအစဉ်များရှိ ...
Фамусов — защитник самодержавия, крепостного права, он рад принизить свои достоинства, дабы понравиться более важным людям. Фамусов остерегается таких бунтарей, как Чацкий. Он же, наоборот, ненавидит прислуживаться, выступает за свободу, солидарен с идеями декабристов и т.д и т.п.
Видимо под словом Ум следует понимать разницу мировоззрений, разницу в отношении к жизни между Чацким, как представителем нового, прогрессивного, и Фамусовым, Скалозубом и другими членами элитного московского общества. Чацкий настроен крайне отрицательно к существующему положению вещей, он не считает службу в том виде, в каком ее понимают Фамусовы, достойным занятием, для него выслуживаться тошно. Он противник крепостничества, противник слепого подражания заграничному, противник раболепства и преклонения. Зато он говорит веское слово в пользу науки и научного подхода к жизни. Фамусов желает только одного — чтобы старый порядок оказался вечным и для него смысл жизни в служении, вот только не родине, а служении наградам. Чацкий для него опасный смутьян и что самое интересное, даже представители молодого поколения бывают солидарны с Фамусовым. Тот же Молчалин делает все, чтобы угодить власть имеющим, Репетилов впустую сотрясает воздух тайными заговорами. В целом Фамусов и его общество сошлись во мнении, что учение — чума, источник всех бед. В то время как Чацкий видит в нем избавление от серости и путь к просвещению, в более счастливое будущее.
ထိုသူနှစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောသားစဉ်မြေးဆက်ဖြစ်ကြသည်။ အားလုံးငယ်ရွယ်ပညာတတ်ကလူလိုပဲ Chatsky အပြုအမူ Famusov တစ်ပုံစံကိုလက်ခံမထားဘူး။ သူကတစ်ဦး sycophant တစ်အသံတိတ်အရိပ်အင်အားကြီးဖြစ် sickens ။ တစ်ဦးက Famusov ကြောက်မက်ဖွယ်ဇွဲထက်သန်ငယ်ရွယ် Chatsky ။ ကျွန်တော်တို့သည်သူတို့အားအကြားခြားနားချက်အတိတ်နှင့်အနာဂတ်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ တစ်ခုမှာအခြားအတိတ်ကာလအပေါ်ကိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်, အချိန်ကာလနှင့်အတူတတ်၏။
24 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,314 စက္ကန့်ကျော် Generate ။